Gaadhiga Ugu Xawaaraha Dheer Adduunka Oo Lasoo Saaray | Hohad News
Gaadhiga Ugu Xawaaraha Dheer Adduunka Oo Lasoo Saaray
Kani waa gaariga ugu awoodda badan ee baabuurta loo sharciyeeyay iney ku socdaan waddooyinka, waana kii ugu horreeyay ee xawaarahaas leh oo Talyaaniga kasoo baxa. Marka ay baabuurta kula tartameysa ku jiraan noocyada kala ah Ferrari iyo Lamborghini, waxay kuu tahay sharaf gaar ah.
Gaarigan oo ku shaqeeya koronto, wuxuu xitaa noqon karaa midka ugu orodka dheer guud ahaan baabuurta ku socota dunida, inkastoo marka baabuurta laga hadlayo ay yihiin kuwa ku shaqeeya batariga (uu meesha ka baxayo magaca gaariga loo yaqaanno supercar, noocuu doonaba ha ahaadee).
Shirkadda baabuurta sameysa ee lagu magacaabo Pininfarina Battista ayaa dhawaan magaalada Geneva kusoo bandhigtay gaari aan noociisa horay loo soo farsameynin, waana mid dhammaantiis koronto ku shaqeeya
Gaarigan marka uu socdo wuxuu xawaaraha saacaddiisu gaari karaa ilaa 250m saacaddiiba.
Cabirkaas ayaa orodka gaarigan ka dhigaya mid aad u dheereeya, isagoo tamartana gabi ahaanba ka helaya qulqulka korontada.
Awoodda fariinkiisa ayaa u dhiganta labo jibaar awoodda gaadiidka caadiga ah ee hadda ugu sarreeya sida midka ay sameyso shirkadda Ford Fiesta, kaasoo ah gaariga loogu gadashada badan yahay gudaha dalka Britain.
Michael Perschke oo ah madaxa shirkadda soo saartay gaarigan ee la yiraahdo Automobili Pininfarina ayaa yidhi: “Awoodiisu waa mid waalli ah, gaarigan wuxuu leeyahay bandhig heer sare ah wuxuuna ku shaqeeya awoodda korontada”.
Ma aha gaarigii ugu horreeyay ee batari ku shaqeeya oo loo soo saaray dunida.
Horay waxaa magaalada Geneva loogu soo bandhigay gawaari noocan ah balse ka xawaare hooseeya.
Image captionShirkadda Rimac ayaa horay Geneva ugu soo bandhigtay gaari ku shaqeeya Koronto
Waa mid xawaare dheer, raaxo ah oo cusub
Image captionMa aha markii ugu horreysay ee lasoo saaro gawaari xawaare dheereeya